धर्म र धार्मिक विश्वासहरूको प्रकृतिको जाँच गर्दै
धर्म के हो? धर्म परिभाषित गर्ने समस्या:
अकादमिक साहित्य भनेको धर्म को वर्णन गर्न को लागी प्रयासहरु भरिएको छ र ती धेरै प्रयासहरु धेरै बेवास्ता छन्। धर्मका परिभाषाहरू एक दुई समस्याबाट पीडित हुन्छन्: तिनीहरू पनि धेरै संकीर्ण हुन्छन् र धेरै विश्वासका प्रणालीहरू हटाउँछन् जुन धेरै मानिसहरू सहमत हुनेछन्, वा तिनीहरू धेरै अस्पष्ट र अस्पष्ट छन्, एकको एक निष्कर्ष निकाल्नका लागि कि कुनै पनि र सबै कुरा वास्तवमा एक धर्म हो।
धर्मको परिभाषा: धर्म कसरी परिभाषित छ?
धर्म परिभाषित वा वर्णन गर्न धेरै विद्वान र शैक्षिक प्रयासहरू एक दुई प्रकारका वर्गीकृत गर्न सकिन्छ: कार्यात्मक वा ठोस। प्रत्येकले धर्मको प्रकार्यको प्रकृतिमा धेरै फरक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर शब्दहरू, धर्मशास्त्रहरू र विभिन्न विद्वानहरूले कसरी धर्म परिभाषित गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूको आफ्नै दृष्टिकोणको जवाफ दिएका छन्।
धर्म बनाम दमन: के धर्म भगवान मा विश्वास द्वारा परिभाषित छ?
के धर्म र धर्म भनेको प्रभावकारी कुरा हो त्यहि कुरा हो, जस्तै कि हरेक धर्म नैतिक र हरेक धर्म पनि धार्मिक हो? केही सामान्य गलत धारणाहरूको कारण, धेरै व्यक्तिले जवाफको जवाफ उत्तरदायी छन्। यो धर्मशास्त्रको बीचमा असामान्य छैन केवल धर्म र धर्म बराबर हो भन्ने मान्न। थप पढ्नुहोस्...
धर्म बनाम धार्मिक: यदि केहि धार्मिक छ, के यो एक धर्म हो?
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी थिईन। उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको थियो।
तर सम्भवतया यो सँधै साँचो छैन - सम्भवतः विशेष गरी धार्मिक धर्मको तुलना भन्दा ठूलो प्रयोग छ। थप पढ्नुहोस्...
धर्मविरुद्ध बनाइएको फिलिप्सी: के फरक छ?
धर्म सिर्फ एक प्रकार को दर्शन छ? के दर्शन एक धार्मिक गतिविधि हो? त्यहाँ कहिलेकाहीं केही भ्रमहरू जस्तो देखिन्छ जस्तो कि कत्तिको र कसरी धर्म र दर्शन एकअर्काबाट फरक हुनुपर्छ - यो भ्रम भ्रममा पर्दैन किनकि त्यहाँ दुवैको बीचको धेरै बलियो समानताहरू छन्।
धर्म र आध्यात्मिकता: के धर्मले आध्यात्मिकतालाई व्यवस्थित गर्यो?
एक लोकप्रिय विचार भनेको ईश्वरीय वा पवित्र संग सम्बन्धित दुई फरक मोडहरू बीचको भिन्नता हो: धर्म र आध्यात्मिकता । धर्मले सामाजिक, व्यक्तिगत र यहां सम्म कि एक्लेक्टिक तरिकाहरुमा जब हुन्छ भने आध्यात्मिकताले यस्ता सम्बन्धहरूलाई वर्णन गर्दछ, जसमा मानिसहरूले सामाजिक र जनशास्त्रलाई सामाजिक, सार्वजनिक र व्यवस्थित माध्यमको वर्णन गर्दछ। थप पढ्नुहोस्...
धर्मविरुद्ध बनावट: धर्म भनेको व्यवस्थित असम्भव छ?
के धर्म र अन्धविश्वास बीचको वास्तविक सम्बन्ध छ? केहि, विभिन्न धार्मिक विश्वासहरु को विशेष अनुयायीहरु, प्रायः बहस गर्नेछन् कि दुवै मौलिक रूप देखि विभिन्न प्रकार को विश्वासहरु हो। ती मानिसहरू जसले धर्म बाहिरै उभिरहेछन्, तथापि, केही धेरै महत्त्वपूर्ण र मौलिक समानताहरूलाई ध्यान दिनेछन् जुन नजिकको विचार सहन सक्छ। थप पढ्नुहोस्...
धर्म बनाम असाधारण: असाधारण र धार्मिक विश्वासहरू समान छन्?
के असाधारण रुपमा धर्म र विश्वासबीचको वास्तविक सम्बन्ध छ? केहि, विशेष गरी विभिन्न धार्मिक विश्वासका अनुयायीहरू प्रायः तर्क गर्दछन् कि दुईवटा विभिन्न प्रकारका विश्वासहरू। ती मानिसहरू जसले धर्म बाहिरै उभिरहेछन्, तथापि, केही धेरै महत्त्वपूर्ण समानताहरूलाई ध्यान दिनेछन् जुन नजिकको विचार धारण गर्दछ।
धर्म र कारण: के धर्म नैतिकता छ?
के धर्म र कारण असंगत छ? मलाई यति सोच्दैन, तर त्यो सँधै सजिलो एक आसान स्थान छैन। यो धर्मको कारण दुर्लभ कारण वा मूल्य तर्क को बढावा दिन को लागी एकदम समय मा धर्म को उच्च भावनाहरु र विश्वास को प्रशंसा को लागि सामान्य छ, दुई चीजहरु जसलाई अक्सर अच्छे तर्क को रोकथाम गर्छन।
के नैतिकता, लोकतन्त्र र न्यायको लागि धर्म चाहिन्छ?
धर्मनिरपेक्षताको बारेमा एक सामान्य उजुरी भनेको ईश्वरमा धर्म र विश्वास नैतिकता, न्याय र एक लोकतन्त्रको लागि आवश्यकता हो। यहाँ आधारभूत आधार यो हो कि अन्ततः मात्र महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्र हुन् जो कि पारदर्शी छन् , र त्यस्ता मानहरू मात्र धार्मिक परम्परा र ईश्वरीय सम्बन्धको सम्बन्धमा बुझ्न र बुझ्न सकिन्छ।
फिलोस्कोफर राइन डिस्टार्ट्स को एक जीवनी प्रोफाइल
के आइन्स्टीन एक एथेटिस्ट, फ्रीथिनर थियो?
खराब विश्वास र पापीपनमा Sartre को अस्तित्ववादी विषयहरू अन्वेषण
ड्रेड र एन्जिस्ट: अस्तित्ववादी विचारमा विषयवस्तु र विचारहरू
एक Posteriori बनाम भगवान र एक Priori: प्रकार को ज्ञान
कार्यस्थलमा बन्द बन्द पसल के हो?
अमेरिकी क्रांतिवादी युद्धमा जर्मन
विन यो ड्रप बल खेलमा मिनेट
जुवा र अन्धकार
20 मजेदार पप संस्कृति र मेम वयस्कों को लागि हेलोवीन पोशाक को निरीक्षण
सीलहरू बनाएर सागर सिंहहरू: फरक के हो?
कसरी ब्यारोमीटर पढ्नुहोस्
शीर्ष टेनेसी कलेजमा प्रवेशको लागि एसएटी स्कोरहरू
बहुवचन संज्ञा मा इटालियन
आफ्नो परिवारको लागि मेमोरी बुक बनाउनुहोस्
आकार निर्धारण: स्किनरियन व्यवहारवाद देखि एक शिक्षण प्रविधी
पुरानो ओलम्पिक - खेल, अनुष्ठान, र युद्ध
रोम फोरम मा भवनहरु को एक ओवरवाइडw
फैटी परिभाषा - रसायन शास्त्र शब्द
आपूर्ति र मांग अभ्यास अभ्यास
शुरुआती पाठका लागि जर्मनको भागको अंश
निकेल र डाइमेड: अमेरिका मा नहीं गरेर रहयो
शुभ धन्यवाद! यहाँ 20 सुपर मजेदार टर्की डे फोटोहरू छन्
कोलम्बिया कलेज (मिसौरी) प्रवेश
शारीरिक कवच र बुलेट प्रूफ वेस्टको इतिहास
मोक्ले-माम्बेबी साँच्चै एक डायनासोर छ?